USolwazi Colin Chapman othole i-NRF A1 rating.
USolwazi Uhlonishwe Ngomsebenzi Wakhe Kwezokonga Imvelo
USolwazi wase-School of Life Sciences u-Colin Chapman uthole i-A1 rating ye-National Research Foundation (i-NRF) ngegalelo lakhe kule ndima nokuhlale eqhamuka nemiphumela emihle yocwaningo.
U-Chapman useneminyaka eqela kwengama-40 enza ucwaningo ngezihlahla nokuthi kudingekani ukunakekela imvelo nezihlahla. Usecashunwe emaphepheni ocwaningo izikhathi ezingama-35 000, washicilela amaphepha ocwaningo angaphezu kwangama-490 kanti usebenza nabanye ozakwabo abaningi kwezokucwaninga. Imisebenzi yakhe yocwaningo ixhaswe ngo-R165 million ngenxa yomsebenzi oncomekayo abawenza wokunakekela imvelo.
Phakathi kwemisebenzi eseqhulwini abayenzayo kubalwa ukuqonda iqhaza lezifo, ukudla nokudlavazeka nokuthi imvelo inakekelwa kanjani. U-Chapman uneminyaka engaphezu kwengama-30 enza ucwaningo eKibale National Park e-Uganda nolwazi olunzulu olugxile esimweni sezulu, impilo yezitshalo nezilwane nemiphakathi nomsebenzi wokunakekela imvelo emahlathini ase-Afrika - konke okumqoka ekuqondeni umphumela wokuguquguquka kwesimo sezulu nokuphazamiseka kwamahlathi.
U-Chapman useke wahlonishwa ngoxhaxha lwemiklomelo emsebenzini wakhe okubalwa kuyo ukuba i-Killam Research Fellow nomcwaningi we-Royal Society of Canada, kwathi ngonyaka wama-2018 wathola indondo i-Konrad Adenauer Research Award eyinikwa i-Alexander von Humboldt Foundation ne-Office of an Academician e-Northwest University e-Xi’an, e-China.
‘Kuyinto enkulu ukuhlonishwa i-NRF kanti ngijabule kakhulu,’ kusho u-Chapman. ‘Lo mklomelo uzongenza ngikwazi ukwenza umsebenzi wami nokuqeqesha ngezokugcinwa kwemvelo, konke okumqoka ekunakekeleni isimo somhlaba.’
U-Chapman, owenza iziqu zobudokotela kwi-Anthropology ne-Zoology e-University of Alberta, walandelisa ngocwaningo lwezifundo zobudokotela e-McGill iminyaka emibili nase-Harvard University eminye iminyake emithathu. Useke wabamba izintambo zokufundisa eMnyangweni we-Zoology e-Makerere University e-Uganda kusukela ngonyaka we-1990, kwathi ngowe-1995 waba i-Conservation Fellow ye-Wildlife Conservation Society. Wayeyilungu lomkhandlu we-Zoology e-University of Florida iminyaka eyi-11, waphindela e-McGill ngowezi-2004 lapho aphatha khona isikhundla sokuba i-Canada Research Chair Tier 1 e-Primate Ecology and Conservation.
Kusukela ngonyaka odlule, unesikhundla e-George Washington esikwazi ukumenza abe nesikhathi sokwenza umsebenzi wokonga imvelo. Wayeyilungu le-Committee for Research and Exploration e-National Geographic Society iminyaka eyisishiyagalolunye.
Umsebenzi aziqhenya ngawo kakhulu u-Chapman owokunakekela abantu awenze ngenkathi enza ucwaningo. Wathola i-Velan Foundation Awards for Humanitarian Service ngenxa yomsebenzi wakhe wokunikela emphakathini okukhona kuwona ukusiza abantu basemakhaya ukuthi basungule izikole, umtholampilo ongumahambanendlwana, nemisebenzi yokonga imvelo egxile ezimfeneni nasemachibini.
Wafika e-UKZN enguSolwazi Ohlonishwayo ngowezi-2017, kanti ubegxile ekusabalaliseni izinjongo zokongiwa kwemvelo nokuqeqesha isizukulwane esisha sabantu baseNingizimu Afrika nabase-Afrika esizohola impi yokonga imvelo. Uthi lo msebenzi ukhuliswe ukusebenzisana kwakhe noSolwazi Colleen Downs oyi-South African Research Chair in Ecosystem Health and Biodiversity KwaZulu-Natali nase-Eastern Cape e-UKZN.
‘Sekunesimo sokuphuthuma ekongeni imvelo okubonakala ngokuthuswa ukuphela kwamahlathi nokuguquguquka kwesimo sezulu,’ kusho u-Chapman.
Umsebenzi ka-Chapman ubugxile ezindaweni zokonga imvelo ezinesidingo esikhulu, ikakhulukazi ezilwaneni ezizingelayo kwathi kamuva kwaba sezindlovini. Uthi ukubuyiselwa kwendawo yokuhlala kuzoba mqoka ohlelweni lokugwema ukushabalala kwezilwane ezihlala emajukujukwini amahlathi, okungenzeka ngaphambi kokuphela kwekhulunyaka uma kungabhukulwa.
‘Ngihlela ukusebenzisa le ndawo entsha engibekwe kuyona ukubuyekeza izindlela zokonga imvelo, obekuvame “ukugxila ezitshalweni”, kuye kuloku engithanda ukukubiza ngokuthi "ukongiwa kwezilwane”,’ kusho u-Chapman.
Amagama: ngu-Christine Cuénod: cuenod@ukzn.ac.za
Umcwaningi Ovelele Uthole Indondo i-Vice-Chancellor’s Award
Isifundiswa SezeMfundo Sithole i-Distinguished Teachers’ Award
Umfundi WezesiNtu Wenze Kahle Kakhulu Ekubhukudeni